R/wasaaraha Soomaaliya oo la kulmay Wafdi ka socda dowladda Qadar | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA R/wasaaraha Soomaaliya oo la kulmay Wafdi ka socda dowladda Qadar
R/wasaaraha Soomaaliya oo la kulmay Wafdi ka socda dowladda Qadar
Muqdisho(SNTV) Mas’uuliyiintaan oo ka socotay Wasaaradda Dekadaha dowladda Qatar ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyey Wasiirka dekadaha iyo Gadiidka Badda Soomaaliya iyo masuuliyiin ka socota Madaxtooyadad.
Ujeedada wafdigaan ayaa ahaa in ay sahmin iyo qiimayn ku sameeyaan qaar ka mid ah Dekadaha dalka taas oo qayb ka ah heshiisyo dhex maray dowlaha Soomaaliya iyo Qatar kadib booqashadii uu Madaxweynaha Jamhuuriyaddu ku tagay maagaalada Dooxa ee dalka Qadar.
Ra’iisul Wasaaraha xukumadda federaalka Soomaaliya ayaa xubnahaan ku qaabilay xafiiskiisa waxuuna uga mahadceliyey boqashada ay Muqdisho ku yimaeen, isagoo u sheegay in dowladda Soomaaliya ay soo dhawaynayso cid kasta oo maalgashi ku samaynaysa dalka, iyadoo loo marayo habrac shariciga ee u yaalla Soomaaliya.
Wasiirka dekadaha iyo gadiidka Badda ee xukumadda Federalka Soomaaliya Marwo Maryan Aweys Jaamac oo warbaahinta qaranka kula hadashay xafiska Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa u mahadcelisay wafdiga ka socda Qadar, waxaana ay sheegtay in labada waddan uu ka dhaxeeyo xiriir aad u wanaagsan.
Previous articleGuddoomiyaha G/Banaadir oo xariga ka jaray Saldhigga Degmada Boondheere
Next articleQodobo laga soo saaray Shir looga hadlayay arrimaha maalgashiga dalka oo Muqdisho ka dhacay